Xaflad ku aadan sanad guuradii 13aad ee Puntland oo Shiinaha ka dhacdey (Sawiro) – SBC
Xaflad ku aadan sanad guuradii 13aad ee Puntland oo Shiinaha ka dhacdey (Sawiro)
Waxaa xalay oo ay taariikhdu ahayd 31/07/2011 lagu qabtay magaalada Changchun ee carriga China xafladda lagu xusayey sanad guuradiii 13aad ee 1 August ee aasaaskii dowlada Puntland ee Soomaaliyeed.
Waxay ahayd munaasabadii ugu horaysay oo lagu maamuuso sanad guuradii Puntland ee ka dhacda dalka China, taa soo loo soo agaasimay si weyn waxaana ka so qayb galay dad weynaha Soomaliyed ee ku dhaqan Changchun, waxaana jiray dhalinyaro reer Puntland ah oo uga so safray magaalooyinka China si ay walaalahooda kale ula qaybsadaan habeenkan ay damaashaadayeen dhalinta rer Puntland ee China.
Furitaanka aayadaha qur’aanka ka dib waxaa laguda galay barnaamijkii munasabada oo aad u baaxad weynaa kaa soo ay ka hadleen martidii gobolada, gudoomiyaha ururka ardayda Somaaliyeed ee wuhan,gabadh ku hadashay afka gabdhaha.
Taarikhada Puntland iyo halka ay tiigsanayaan oo laga hadlay iyo muuqaalo ka tarjumayay hanaanka waxbarashada Puntland xilligan .
Waxaa iyadana si talantaali ah u socday heesaha wadaniga Puntland ee hirgalay iyo kuwo Soomaaliyeed kuwaas oo so jiitay ka so qaygalayaashahabeenka damaashaadka rer Puntland ee dalka China.
C/salaan Baxwal oo u hadlayey martida wuxu yiri “waxaan aaminsanahay in xalka Soomaaliya ku jiro in asaaskii Puntland wax lagaga daydo, waxaan kalo dhalinta u sheeegyaya in dalkan china wixii wanaag ah kaga daydaan oo wadanki dib ugu celiyaan”
Maxamed Faarax Qooje oo khadka ka so galay wuhan wuxu yiri “waxaan idinka codsanayaa inaad midnimadiina ilaalisaan dadaalkii inana aad xajisaan si aad yoolkiina u gaartaan, waxaadna indho u tihiin umadda Somaaliyeeed xilligan adag ee noqda dadki badbaadin lahaa”.
Maryam Shiikh Cali oo u hadlaysay dumarka waxay ku dheeraatay hamiga iyo isku duubnida dhalinta waxayna ku nuuxnuxsatay in u wadajirku guul yahay iyado ugu baaqday dadka in qof walba oo Soomaali ah hadii uusan horumarin deegaankiisa uusan Soomaliweyn wax ka qaban karin.
Waxaa jirtay riwaayad lagu matalay meesha taaso ay dhalintu ugu talogaleen in ay umuujiyaan shucuurtooda walalahooda ku dhibban Koonfurta Soomaliya,waxaana ka so qayb galayaasha iyo Somalida caalamka ka codsadeen inay u gurmadaan walalahooda kale.
Gabagabadii xaflada waxaa gudiga munaasabada khadka Puntland ka so galay wasiirka dhalinyarada iyo sports puntland Prof. C/wali Cabdulle
Wuxuuna xusay inu ka xunyahay inuu si live ah uga qaybqaadan kari waayey mashquul dartiis u waqtigu u saamixi waayey wuxuuna uga baaqay dhalinta rer puntland inay midnimadooda ilaaliyaan ,wuxuuna xusay inay farxad u tahay reer Puntland inaad maanta China ku xustaan sanadguuradii Puntland,waxaan iidn leeyahay ku gaara sanadkan sanadkiisa barwaaqo iyo guuul.
Dhinaca kale waxaa galabta waqtiga Chinaha jirtay ciyaar saaxiibtinimo ah oo lagu maamusayey maalinkan qiimaha weyn ee kowda agoosto ,waxaana wada ciyaaray rer changchun oo cupka dhigay iyo asxaabta rer jilin oo marti ahaa……waxaana cupkii si hufan u qaaday walalaha rer puntland ee changhcun ku waas oo marti galiyey munaasbadii xaflada iyo tii ciyaartaba.
Isku so wada duuboo waxay munaasabadani ku dhamaatay jawi aad u wanaagsan oo ay ka so qaybgalayaashu aad ugu riyaaqeeen.